1. Waa maxay nidaamka dalabku?
2. Sideen ula socon karaa xaalada amarkayga?
3. Hababkee ayaan ku bixin karaa amarka?
4. Waa maxay Floristum.ru?
5. Maxaan ugu bixin kari waayey kaar?
6. Ma dammaanad qaadi kartaa in bixinta kaarka ay aamin tahay?
7. Ma ku bixin karaa lacag caddaan ah?
8. Sidee lacag celinta u shaqaysaa?
9. Ma jiraan wax dammaanad qaad ah oo ah in lacagta la bixiyay ay adiga ku soo gaadhayso?
10. Habkee ayaa loo isticmaali karaa in lagu bixiyo amarka?
11. Si dhakhso leh u gaarsiintu suurtagal ma tahay?
12. Waa maxay qiimaha gaarsiinta?
13. Gaarsiinta malagu samayn karaa waqtiga saxda ah?
14. Ma dalban karaa amar haddii aanan aqoon cinwaanka qaataha?
15. Sidee layla socodsiin doonaa bixinta?
16. Ma dalban karaa dalab in la geeyo dal kale?
17. Goorma ayaa amarka la keenayaa?
Su'aalaha ku saabsan amarka
18. Sidee loo dalbaa amar?
19. Maxaa la sameeyaa haddii aadan jeclayn bouquet-ka?
20. Anigu kulama xidhiidhi karo ubaxleyaasha taleefan. Maxaa la sameeyaa
21. Haddii waqtiga dhalmada ay u baahan tahay in lala heshiiyo qaataha, goorma ayey soo wacayaan?
22. Ma u baahanahay inaan horay u sii dalbado?
23. Sidee loo sameeyaa amar shirkadeed?
24. Heshiiska hay'adaha sharciga ah
25. Sidee loo sameeyaa diiwaangelinta?
26. Waa maxay tirada ugu yar ee midabada la heli karo si loo dalbado?
Su'aalaha ku saabsan bouquet-ka
27. Suurtagal ma tahay in wax laga beddelo waxyaabaha ka kooban bouquet-ka ama nidaamka midabkiisa?
28. Xagee ka heli kartaa halabuurka bouquet-ka?
29. Sideen ku ogaan karaa xajmiga ubaxyada?
30. Maxaan ka heli karaa qaybta Super Offer?
31. Ka waran haddii aad u baahan tahay bouquet leh ubaxyo gaar ah?
32. Bouquet-ka ma la mid noqon doonaa sida sawirka ka muuqda goobta?
33. Bouquet-ka ma sii weynaan karaa?
34. Suuragal ma tahay in la iibsado ubaxyo dheryo ama geedo?
35. Xagee ku dhigi karaa rabitaankeyga amarka?
36. Ubaxyadu miyey cusbaanayaan?
Dammaanadda tayada adeegga Floristum.ru
37. Bixinta ma ku jirtaa bogga internetka mid aamin ah?
38. Miyaanan ka walwalin karin badbaadada lacagtayda?
39. Sideen ku soo ceshan karaa qaddarka la bixiyay?
40. Xagee ku qori karaa cabashadeyda?
41. Sideen u qori karaa dib u eegis?
42. Dhammaan dib u eegista ma dhabbaa?
43. Miyaan diri karaa xirmo leh kaarka boostada?
44. Ma dalban karaa wax aan ka ahayn bouquet?
45. Kaadh noocee ah ayaa loo soo dirayaa iyada oo ukun ah?
46. ​​Ma arki karaa sawirka qaataha oo wata bouquet la geeyay?
47. Ma leedahay barnaamij taleefannada casriga ah?
48. Maxay xulashada ubaxyada ugu kala duwan yihiin magaalooyinka?
49. Maxay qiimayaashu gobollada uga sarreeyaan kan Moosko?
Marka hore, waxaad sheegtaa magaalada la keenayo, xulo bouquet-ka aad jeceshahay adigoo gujinaya badhanka dushiisa oo aad u aado bogga wax laga iibsado. Halkan waxaad ku qeexaysaa xogta qofka helaya, waqtiga gudbinta iyo xogta soo diraha bouquet-ka. Ka dib bixinta lacag bixinta, amarku wuxuu u socdaa ubaxleyda. Waxaa lagugu ogeysiin doonaa gudbinta fariin laguugu soo dirayo lambarka taleefankaaga iyo emaylkaaga, macluumaadka sidoo kale waxaa laga heli karaa koontadaada gaarka ah ee.floristum.ru/en.
Waxaan u dirnaa macluumaadka ugu dambeeyay ee ku saabsan xaaladda amarkaaga fariimo SMS ah, emayl, waxaad sidoo kale ka eegi kartaa xaaladda dalabka koontadaada gaarka ah boggeena. Waxaad heli doontaa SMS iyo fariin iimayl ah oo ku saabsan risiidka lacag bixinta ee amarka iyo xiriirada ubaxleyda aruurinaya bouquet-kaaga, waxaad la xiriiri kartaa ubaxleyda wakhti kasta, cadeyn heerka ama ku hagaaji xuduudaha dalbashada ubaxyada.
Waxaad toos ugu bixin kartaa internetka adoo isticmaalaya kaarka bangiga shaqsi ahaan. Hay'adaha sharciga ah, lacag bixinta bangiga ayaa loo heli karaa.
Floristum.ru waa adeeg ku habboon halkaasoo dukaamada ubaxa iyo ubaxleyda shaqsiyeed ee ka kala yimid adduunka oo dhan ay alaabtooda iibiyaan. Halkan waxaad ka dooran kartaa oo ka dalban kartaa bouquet ka soo ubaxa magaaladaada, taas oo si buuxda u qancin doonta rabitaankaaga. Intaa waxaa dheer, macaamiisha dhabta ah waxay ku dhajiyaan dib-u-eegis goobta, taas oo aad ugu habboon markay dooranayso meel ay amar ka bixiso ubax bixinta. Floristum.ru waxay kuu damaanad qaadeysaa fulinta amarka, xaaladaha aan la filayn ee adeega ayaa kugu soo celin doona lacagtaada, tan waxaa macquul ah xaqiiqda ah in ubaxleyaasha iyo dukaamada ay helaan lacag ubax bixinta kaliya seddex maalmood ka dib amarka la dhameystiray, inta lagu jiro tan muddada macmiilku uu fayl garaysan karo ashtako oo lacag dib loogu soo celin karo.
Hubso in faahfaahinta kaarkaaga bangiga si sax ah loo galay, magaca iyo magaca aabbahaa lagu qoro Ingiriis sida saxda kaarka. Koodhka CVV waa 3 lambar oo ku yaal dhabarka kaarka. Xaaladaha badankood, nidaamku wuxuu kuu sharixi doonaa sababta bixinta loogu dhammeyn waayey si guul leh. Haddii lacag bixinta uu diido bangigaaga, hubi inaad la xiriirto adeegga taageerada adiga oo isticmaalaya lambarka bilaashka ah ee kaarkaaga. Isku day inaad u dooratid qaab lacag bixin oo ka duwan dalabkaaga.
Haa, waxaan u dammaanad qaadaynaa nabadgelyada macaamiisheenna. Lacag bixinta waxaa lagu sameeyaa bog aamin ah oo gaar ah, iyo xogta kaarka kadib bixinta lama keydinayo nidaamka. Waxaan lashaqeynaa Nadezhda iyo nidaamka lacag bixinta CloudPayments ee caanka ah.
Maanta waa wax aan macquul aheyn. Mustaqbalka dhow, bixinta ubax bixinta lacag caddaan ah ayaa heli doonta macaamiisheenna, ka dib markaad buuxiso xogta lagama maarmaanka u ah amarka, waxaa lagu siin doonaa dhowr hab oo lacag bixin ah oo aad dooratay.
Haddii ay dhacdo in la joojiyo amarka, lacagta la bixiyay waxaa lagu soo celinayaa iyada oo buuxda koontadaada bangiga gudahood 7 maalmood oo shaqo gudahood.
Bixinta amarka kaarka bangiga waa deg deg. Waxaan la shaqeynaa nidaamka CloudPayments, oo ah hab lacag bixin la xaqiijiyay. Kadib bixinta, waxaad heli doontaa fariin ah in hawlgalka lagu guuleystay. Waxaad sidoo kale ku xaqiijin kartaa tan koontadaada gaarka ah.
Waxaad ku bixin kartaa amarkaaga tooska ah bogga internetka kaarka bangiga ama rasiid kaash ah. Hay'adaha sharciga ayaa isticmaali kara adeegga lacag-la'aanta lacag-la'aanta ah.
Ku xigta bouquet kasta waa waqtiga lagu qaadan doono naqshadeynta iyo bixinta ubaxyada. Boggu wuxuu leeyahay shaandheyn ku habboon "Gaarsiinta Degdegga ah", iyada oo la adeegsanayo, waxaad arki doontaa xulashooyinka ubaxyada lagu soo gaarsiin karo muddo gaaban.
Gaarsiinta magaalada waa lacag la’aan, caasimada iyo St. Petersburg - wadada giraan ahaan. Haddii cinwaanka geynta uu ka baxsan yahay magaalada, markaas qiimaheeda si otomaatig ah ayaa loo xisaabiyaa. Nidaamka, oo ku saleysan masaafada kilomitir, ayaa ku siin doona qiimaha dirista. Caadi ahaan waxaa lagu qiyaasaa 45 ruble 1 kiilomitir.
Haddii aadan tilmaami karin cinwaanka dirista saxda ah, qofka qaataana wuxuu joogi doonaa banaanka magaalada isla marka uu dirayo bouquet-ka, markaa qof shaqaale ah ayaa hubaal kuu soo wici doona si aad u xalliso arrintan.
Websaydhka, waxaad ku cayiman kartaa muddada bixinta saacad kasta. Nasiib darrose, adeeggayagu kuma bixiyo waqtiga saxda ah. Laakiin waxaan isku dayeynaa inaan u helno qaab shaqsiyeed macaamil kasta, sidaa darteed waxaad tilmaami kartaa waxaad rabto ee amarka, shaqaalaheenuna waxay isku dayi doonaan inay sameeyaan wax kasta oo suurtagal ah si ay u hirgeliyaan.
Dabcan, kaliya noo dhaaf lambarka taleefanka qaataha. Warqadda dirista ayaa wici doonta oo sheegi doonta waqtiga iyo goobta bixinta amarkaaga.
Kadib amar bixinta, waxaad heli doontaa fariin leh xiriiriye gaar ah si loo hubiyo heerka amarkaaga. Adigoo gujinaya, waxaad la xiriiri kartaa ubaxleyaasha, fiiri sawirrada bouquet-ka dhammaaday oo la soco meesha amarkaaga khariidada. Dhamaadka dhalmada, waxaad u qori kartaa dib u eegis ubaxa aad la shaqeysay. Waan ku faraxsanahay marka macaamiisha ay bixiyaan jawaab celin, markaa waxaad noo soo diri kartaa farriin jawaab celin ah oo leh dareenkaaga guud ee dalbashada ubax bixinta.
Haa, adoo kaashanaya adeegeena waxaad ku bixin kartaa ubax ma aha oo kaliya dalka oo dhan, laakiin adduunka oo dhan. Kaliya ku qor magaalada aad xiiseyneyso baaritaanka waxaana lagu tusi doonaa dhammaan xulashooyinka la heli karo ee loogu talagalay bouquets.
Bouquet kasta oo u dhow waxaa ku yaal wakhti, taas oo lagama maarmaan u ah diiwaangelinta iyo u dirista bouquet-ka cinwaanka. Markaad dalbanayso amar, hubi inaad diiradda saartid. Haddii aad u baahan tahay inaad si deg-deg ah ubaxiso ubax, ka dib isticmaal shaandhada Bixinta Degdegga ah. Haddii aad ubaahantahay dirid taariikh cayiman, kadib xulo markaad amar bixinayso. Haddii calaamadda ku dhejiso erayga "Xusuusin" koontadaada shakhsi ahaaneed, markaa adeegga Floristum.ru ayaa ku xusuusin doona amarkaaga. Warqadda ayaa kuu imaan doonta seddex maalmood ka hor maalinta loo qorsheeyay bixinta.
Kaliya tilmaam goobta bixinta, dooro bouquet aad jeceshahay oo dalab dalabkaaga. Amarka, tilmaam faahfaahinta xiriiriyaha diraha iyo qaataha, iyo sidoo kale waqtiga dirista. Ka dib markii lagu guuleysto bixinta amarka, ubaxayaasheena ayaa u qaadan doona inay shaqeeyaan. Waxaa lagugu ogeysiin doonaa gudbinta fariin ahaan.
Haddii aadan jeclayn ubaxyada aad heshay sabab kasta ha noqotee, ka dib u tag koontadaada gaarka ah ama raac xiriiriyaha laguu soo diray ee farriinta ama boosta. Halkaas ayaad uga tagi kartaa jawaab celinta ku saabsan amarkaaga. Haddii dib-u-eegista ay tahay mid diidmo ah, markaa waad furi kartaa muran, markaa xaddiga lacagta ku jirta koontada ubaxa ayaa la xayirayaa inta ay socoto dacwadaha. Iyadoo la raacayo siyaasada adeegeena, macmiilku wuxuu kula heshiin karaa ubaxlaha inuu badalo bouquet ama uu ku soo celiyo qadarka oo buuxa. Ubaxleydu sidoo kale waxay xaq u leeyihiin inay kugu siiyaan qiimo dhimis amarrada soo socda. Muran ayaa la furi karaa saddex maalmood gudahood ka dib marka la soo gudbiyo bouquet-ka. Haddii aad horey ugu qortay dib u eegis wanaagsan amarka bakhaarka ama ubaxle shaqsiyeed, markaa muranku ma furi doono.
Waxaad riixi kartaa batoonka "kama gudbi karo dukaanka". Xaaladdan oo kale, ubaxa ubaxu wuxuu heli doonaa ogeysiis aad isku dayday inaad soo wacdo, qiimeynta dukaankana si otomaatig ah ayaa loo dhimayaa. Dhanka kale, waxaan la xiriiri doonnaa dukaanka, shaqaalahoodana hubaal ayaa dib kuugu soo wici doona.
Badanaa qaatayaasha waxaa lala xiriiraa ka hor bixinta dhabta ah. Warqaddu waxay ku heshiin doontaa waqti ku habboon in cinwaan loogu geeyo ubaxyo cusub. Haddii aad dalbatay amar taariikh cayiman, qaataha waxaa lala soo xiriiri doonaa maalinta dirista, badiyaa subaxa. Koontadaada shakhsi ahaaneed, waxaad ku ogaan kartaa waqtiga dirista ee amarkaaga, waxaa loo beddelayaa wakhti ku habboon qofka qaata.
Bouquet kasta, waqtiga ugu yar ee diiwaangelintiisa iyo gaarsiintiisa ayaa la go'aamiyaa, waxaa lagu muujiyaa bouquet kasta. Waxaad fursad u leedahay inaad dalbato amar hore iyo maalinta dhalmada.
Adeeggeenu wuxuu si firfircoon ula shaqeeyaa hay'adaha sharciga wuxuuna si joogto ah u fuliyaa amarrada shirkadaha, tan waxaa nagu caawinaya nidaam otomaatig ah. Noocyo badan oo ubax ah ayaa kuu oggolaanaya inaad doorato bouquets munaasabad kasta. Markaad dalbanayso amar, waa inaad sheegtaa faahfaahinta cidda sharciga ah. Qaan-sheegashada waxaa si otomaatig ah loogu soo diri doonaa boostadaada.
Markaad amarka koowaad ku dhigeyso adeegeena hay'ad sharciyeed, waxaa si otomaatig ah laguugu soo diri doonaa warqad leh heshiis iyo qaansheegad. Waa inaad buuxisaa, saxiixdo oo aad ku dirtaa heshiiska aad heshay laba nuqul boostadayada. Markaa midkood ayaan dib kuugu soo diri doonnaa.
Haddii aad xiiseyneyso inaad aragto qandaraaska kahor intaadan dalban amarka, ka dib nala soo xiriir: @
Iibsadaha ayaa iska diiwaangeliya goobta si otomaatig ah ka dib markii uu dhigo amarkiisii ​​ugu horreeyay. Lambarka taleefanka gacanta ee aad ku qeexday macluumaadka dalabka ayaa kuu noqon doona gelitaankaaga mustaqbalka. Koodhka soo gelitaanka koontadaada shakhsi ahaaneed waxaa laguugu soo diri doonaa farriin.
Haddii aad dalbato ubax halkii gabal, waa inaad doorataa ugu yaraan 7 gogo '. Waxaan kugula talineynaa inaad tagto qaybta "Super Offer", waxaa laga heli karaa bogga ugu weyn ee goobta. Waa kuwan dalabyo ka yimid dukaamada jumlada iyo tafaariiqda oo leh sumado qiimo leh.
Haa, waad awoodaa. Haddii aad rabto inaad wax ka bedesho bouquet-ka la doortay, markaa kaliya ku dhaaf rabitaankaaga macluumaadka dheeraadka ah inta lagu jiro nidaamka dalabka. Ubaxleyaashayada ayaa ku soo wici doona si ay ugala hadlaan fursadaha beddelka suurtogalka ah.
U dhow sawirka leh bouquet-ka waxaa jira falanqeyn buuxda oo ku saabsan halabuurkeeda. Waxaad sidoo kale gujin kartaa magac kasta oo ubaxa ah, waxaa lagu muujin doonaa midab ahaan sawirka.
Cabbirka bouquet-ka ayaa lagu muujiyaa sawir kasta. Iyaga waxaa muujiya ubaxa oo isagu ah qoraaga isku dubaridka ubaxa.
Waa kuwan dalabyada ka imanaya dukaamada jumlada iyo tafaariiqda oo leh qiimo ku habboon bouquets. Intaa waxaa dheer, waxaad shakhsi ahaan go'aan ka gaari kartaa tirada ubaxa, nooca, dhererka jirida iyo midabka.
Si aad u hesho bouquets leh ubaxyada aad u baahan tahay, tixraac caawimaadda miirayaasha.
Oh hubi. Ubaxleydu waxay soo dhajiyaan sawirro ubaxyo ah oo ay horey u soo aruuriyeen goor hore, sidaas darteed way u fududaan doontaa iyaga inay soo saaraan isla halabuurka.
Haa, adoo tagaya bogga wax soo saarka, waxaad ku kordhin kartaa bouquet 30% ama 60% Taasi waa, qiimaha bouquet-ka ayaa ka sarreyn doona qaybtaan ka mid ah qaddarka asalka ah, ubaxyada ku jira bouquet-ka ayaa lagu dari doonaa halabuurka. Haddii aad doorato bouquet ah hal nooc oo ubax ah, markaa waxaad ku kordhin kartaa lambarkooda lambar kasta.
Dhammaan xulashooyinka bouquet waxaa lagu soo bandhigay goobta. Waxaan kugula talineynaa inaad u adeegsato miiraayaal ku habboon raadintaada. Laakiin waxaan inta badan la shaqeynaa ubaxleyda la shaqeeya ubaxyada la jaray.
Muuji rabitaankaaga iyo shuruudaha ku saabsan fulinta dalab macluumaad dheeri ah. Haddii ay diyaar yihiin, ubaxa ayaa hubaal kuu soo wici doona si aad uga wada hadashaan.
Ubaxleyaasha la shaqeynaya adeegga Floristum.ru waxay yaqaanaan qaanuunkayaga: “Kaliya ubaxyo cusub! Diido? Floristum.ru adiga maahan. " Sidaa darteed, waxaad hubin kartaa in ubaxyo cusub oo keliya ay ku jiraan halabuurka. Marka la gaadhsiiyo bouquet-ka, qaataha wuxuu qiimeeyaa ubaxnimada ufiican. Ka dib oo dhan, ubax kasta oo aad xiiseyneyso, waxaad ka heli kartaa dib u eegis boggayaga ah.
Damaanad qaadka Floristum.ru
Haa, lacag bixinta waxaa lagu sameeyaa bog gooni ah, xogta macaamiishana lama keydin. Waxaan kaliya la shaqeynaa nidaamyo caan ah oo la isku halleyn karo.
Haa dabcan. Markaad dalbanaysid amar, waxaad lacag ku shubtaa marka hore koontada adeeggayaga, halkaas oo ay ku kaydsan yihiin illaa amarku dhammaado iyo saddex maalmood oo kale kadib. Qiyaasta noocan ah waxaa loo qaadaa si macmiilku su'aalo uga qabo amarka. Inta lagu jiro waqtigan, waxaad fursad u leedahay inaad furto muran, markaa lacagta laguma xisaabtami doono akoonka ubaxa illaa inta dhibaatooyinka oo dhan laga xallinayo.
Haddii amarka horeyba loogu qaatay shaqo, markaa waa inaad sugto 1 illaa 14 maalmood oo shaqo.
Haddii aad wali ka niyad jabsan tahay amarkaaga, hubi inaad qorto dib u eegis. Hadday diidmo tahay, markaa waxaad la furi kartaa khilaaf ubaxle. Waqtiga caddaynta dhammaan duruufaha, lacagta ku jirta akoonka ubaxa ayaa la xannibi doonaa. Waad ku heshiin kartaa ubaxlaha inaad bedesho bouquet ama aad soo celiso lacagta oo dhan. Ubaxleyaashayadu waxay qiimeeyaan macaamiishooda, sidaa darteed waxay had iyo jeer u siiyaan qiimo dhimis amarrada soo socda. Muran ayaa la bilaabi karaa saddex maalmood gudahood laga bilaabo taariikhda keenista bouquet-ka. Haddii aad horey uga tagtay dib u eegis wanaagsan oo ku saabsan amarka, markaa furitaanka khilaafku waa wax aan macquul ahayn.
Ka dib marka ubaxyada la dhiibo, farriin ayaa loo diri doonaa lambarkaaga taleefanka, taas oo laga jawaabi karo taas oo aad ku qori karto dareenkaaga ku saabsan la shaqeynta ubaxleyda iyo amarka laftiisa. Bogga, adoo galaya koontadaada gaarka ah, waxaad ku qori kartaa dib u eegis.
Dukaan kasta wuxuu leeyahay dib u eegis badan, iyaga dhexdooda waxaa ka jira jawaabo togan iyo kuwo taban. Mid kasta oo iyaga ka mid ah ayaa lagu muujiyay cidda qortay dib u eegista: macaamilka ama qaataha. Dib u eegista waxaa tafatiri kara oo kaliya qofka horey u qoray.
Waxaan u siinnaa kaar bilaash ah bouquet kasta. Kaliya macaamilka waa inuu qoro qoraalka hambalyada. Ubaxle wuxuu dooran doonaa kaar u dhigma bouquetkaaga iyo qoraalka.
Markaad dalbaneyso amar, waxaa laguu soo bandhigi doonaa dhowr alaab oo dheeri ah. Haddii aadan ka helin waxaad u baahan tahay halkan, ka dib la xiriir shaqaalaha, hubaal way kuu gargaari doonaan.
Ubaxle wuxuu doortaa kaarka salaanta isagoo ku saleynaya qoraalka aad qortay. Laakiin haddii aad leedahay rabitaanno gaar ah, markaa nala soo socodsii iyaga wixii ku saabsan macluumaadka dheeriga ah markaad dalbanayso amar.
Markaad dalbanaysid, sax ka dhig ereyada hortiisa "Sawir ku soo qaado leh ubax". Haddii cinwaanku ogolaado, markaa waxaad ka heli doontaa sawirka koontadaada gaarka ah ama emayl ahaan.
Codsiga moobiilka "Floristum.ru ubax" ayaa dhowaan lagala soo bixi karaa AppStore ama PlayMarket.
Adeegayagu wuxuu shaqaaleysiiyaa ubaxleyaal ka kala yimid magaalooyin kala duwan. Markaad dalbaneyso amar, ubaxa ubaxu wuu la shaqeeyaa, kaasoo ku daabacay dalab magaalada aad dooratay. Magaalo kastaa waxay leedahay ubaxlayaal kala duwan, sidaa darteed noocyadu sidoo kale way kala duwan yihiin.
Waxaa jira ubaxley badan oo ku yaal magaalooyinka waaweyn, sidaa darteed waxay ku soo jiitaan macaamiisha ma aha oo kaliya tiro ballaaran, laakiin sidoo kale qiimo jaban.